Shacabka Masar oo maalintii 2 Banaabax ka dhigaya fagaaraha Al taxriir ee Qaahira – SBC
Shacabka Masar oo maalintii 2 Banaabax ka dhigaya fagaaraha Al taxriir ee Qaahira
Kumanaan ka tirsan Shacabka Masaarida,ayna ku jiraan qoysaskii ay dadkooda ku dhinteen banaabaxyadii isbadal doonka ahaa ee dalkaasi ka dhacay ayaa maalintii Labaad Banaabax ka dhigaya Deegaanka Al taxriir ee Magaalada Qaahira.
Banaabaxyadan cusub ayaa waxaa ka qayb qaadanaya Ururada, Axsaabta iyo weliba siyaasiyiinta,iyadoona dhamaantood ay dalbanayaan in Maxkamad lasoo taago madaxweynihii hore ee Masar iyo weliba qoyskiisa.
Qaar kamid ah dadka ku banaabaxaya Al taxriir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay sii wadayaan mudaaharaadyada tan iyo inta laga xaqiijinayo Maxkamadaynta Xusni Mubaarad,qoyskiisa iyo weliba saraakiishii ka qayb qaadatay dilkii loo gaystay boqolaal Masaari ah intii ay banaabaxyada isbadal doonka ah ay socdeen.
Banaabaxyadan ayaa imaanaya Xili raysal Wasaaraha Masar Essam Sharaf uu soo saaray Amar Xilka looga qaadayo Saraakiishii ciidaka ee ka qayb qaatay dhibaataynta shacabka intii ay banaabaxyada socdeen,iyadoona sidoo kale uu sheegay in la maxkamadayn doono dhamaan saraakiishii iyagu musuq maasuqa sameeyay intii uu xukunka hayay Xusni Mubaarak.
Wasiirka Arimaha Dibada Masar Maxamed Al caraabi ayaa beeniyay wararka sheegaya in Xukuumadooda ay Khaliijku cadaadis ku saarayaan in dib loo dhigo maxkamadaynta Xusni Mubaarak oo lagu wado bisha Augost maxkamad lasoo taago.